Istaraatijiyad xayeysiis cusub oo loogu talagalay nooca Freixenet | Abuurista khadka tooska ah
Sannad kasta kuwaan Taariikhaha kirismaska, qof walba waxaan sugeynaa ogeysiisyada ugu caansan oo sanadba sanadka ka dambeeya taagan. Diisambar ayaa soo socota, sidaa darteedna, dhammaan ololaha Kirismaska.
La sumadda cava Freixenet Kirismas kasta wuxuu sameeyaa maalgashi muhiim ah oo lacag ah isagoo sameeya telefishan ganacsi. Daawadayaasha ayaa sugaya inay ogaadaan dadka caanka ah ee ka soo muuqan doona.
1 Freixenet wuxuu jebiyaa dhaqanka
2 Qiyaasta dadweynaha
3 Dabaaldegyada ku dhawaaqista
4 Horudhaca weyn
5 Ogeysiisyo hore
Freixenet wuxuu jebiyaa dhaqanka
Si ka duwan sanadaha kale, Freixenet ayaa jabiya qorshayaashamaadaama aadan u baran inaad ku aragto dad caan ah xayeysiimahaaga. Sannadkan 2018 waa markii ugu horreysay wejiyo aan la garanaynin ma muuqdaan. Xayeysiiska ka laalaada internetka wuxuu leeyahay mudo ah 0:42 ilbiriqsi. Haddii aan u leexanno taada web waxaan heli doonnaa su'aal ay naga caawinayaan inaan jawaab u helno: »Waa maxay ujeeddadaadu KU Dabaaldeg FREIXENET?«. Degdegga la socda ololahan #CelebraATuRitmo waxaa weheliya qoraal nagu dhiirrigelinaya inaan qiimeyno wax kasta oo aan haysano.
«Daqiiqado yar yar ama xaflado waaweyn. Qoyskaaga, asxaabtaada ama lamaanahaaga. Gudaha gurigaaga, xeebta ama guri miyi ah. Laakiin u dabaaldeg jidkaaga adigoon ku degdegin. Taasi maanta waa maanta iyo in xilligan uu yahay mid gaar ah. Halkan iyo hadda. Sababta oo ah waxa ugu fiican nolosha waa in la ogaado in ay ka buuxdo daqiiqado waaweyn iyo kuwo yaryar oo loo dabbaaldego. "
Sharadka sanadkan ayaa cinwaan looga dhigay «Ku dabbaaldeg xawaarahaaga adigu«. Agaasimaha suuqgeynta, Martina Obregó, ayaa sharraxaysa inay ku saabsan tahay booskaas wuxuu nagu dhiiri gelinayaa inaan u dabaaldegno guulaha nolosha, haba yaraadeene. Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa lagu soo bandhigay degmada Sant Sadurní d'Anoia. The Ujeedada isbedelkan istaraatiijiyadeed waxaa u sabab ah u baahan tahay inaad la xiriirto tiro badan oo dadweyne ah. Waxay xaqiijinayaan in ujeedkoodu yahay inay labadaba ku xirmaan millennials xitaa dadka waaweyn.
Dabaaldegyada ku dhawaaqista
Bartaan cusubi waxay la socotaa dun guud oo ku saleysan afar dabaaldegyo aan waqti lahayn. Kuwa hoos ku xusan:
- A cuntada qoyska.
- A taariikhda jacaylka.
- A xaflad faneed.
- A kulan ku yeeshay xeebta koox dhalinyaro ah.
La hees ka ciyaara asalka muuqaalka oo dhan waxaa iska leh Cole Porter, waxaa cinwaan looga dhigay «Habeen iyo maalin«.
In Muuqaalkii ugu dambeeyay ee xayeysiiska, ee xaflad qaab, ah mawduucyada sanad kasta: Midab dahabi ah y Rooti. Waa inaan taas xoojinaa rooti ayaa la sameeyay iyadoo aan la fiirin kaameradaSidaa darteed, waa wax aad uga dabiici badan kana fog wixii aan ku baran jirnay.
Xilligan waan awoodnaa ka eeg xayeysiiska Bogga rasmiga ah ee Freixenet iyo baraha bulshada, laakiin ma noqonayso ilaa Diisambar 9 ku faafay telefishanka.
El xayeysiinta ugu horeysa ee uu bilaabay Freixenet waxaa ka muuqanayay a wiil dhar gaduudan gashan oo dhalo gacanta hoostiisa ah. Kadib 1972 goobooyinku way dhasheen, oo sanadba sanadka ka dambeeya astaan ​​u ah sumaddan.
Waxay ku dareen weji caan ah 1977, kana badin kana yarayn xiddig caalami ah Liza Minnelli. Xidigo kale oo Hollywood ah ayaa raacay. Freixenet waxaa loo tixgeliyaa sida astaan ​​hormuud u ah inay ka soo muuqdaan dad caan ah oo caalami ah xayeysiinta Kirismaska.
10 sano hadaoo dib-u-warshadayn, oo iyadoon lumin tonicdooda waxay doorteen kan kooxda dabaasha la wada shaqeeyay, qalabka jimicsiga jimicsiga ama weydiisanaya dadweynaha inay galaan tartan kaas oo ay tahay in lagu soo bandhigo go'aanadooda cusub ee Sannadaha Cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Kirismaska ​​Freixenet ma laha goobooyin caan ah